Ekoatora: Ny fahalasanan’ilay mpanoratra Jorge Enrique Adoum · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Aogositra 2009 8:18 GMT
Vakio amin'ny teny Español, 简体中文, 繁體中文, বাংলা, Français, English
Tsy dia matetika no ahitana ireo mpampita vaovao sy ireo mpitoraka blaogy manoratra lahatsoratra mitovy mikasika lohahevitra iray mitana ny sain'ny firenena any Ekoatora. Tsy ela akory izay no nitrangan'izany taorian'ny nahalasanan'ilay lehilahy iray izay noheverina matetika ho iray amin'ireo poety ngezalahy any Amerika Latina. Mitomany ny fahalasanan'i Jorge Enrique Adoum ireo Ekoatorianina, izay vao tany amin'ny faha 19 taonany monja dia efa lasa sekretera manokan'ilay poety malaza, Pablo Neruda. Niasa nandika teny tao amin'ny Firenena Mikambana sy tao amin'ny Fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa, ary nahazo ny loka lehibe Xavier Villaurrutia Award [es], izay ho an'ny mponina Meksikanina ihany.
Ny mpitoraka blaogy Alfredo Vera dia mampahatsiahy antsika teboka iray momba ny anaram-bositra niantsoan'ireo namany sy ny fianakaviany an'i Adoum. Antsoin'izy ireo hoe “Jorgenrique” na “Turquito” tsotra fotsiny izy.
Ny iray amin'ireo sangan'asany tena malaza noforoniny dia niaraka tamina mpanoratra roa hafa Jorge Carrera Andrade [es], Hugo Alemán [es], ary mpanao hosodoko Jaime Valencia [es]. Izy ireo no namorona izay noheverina matetika ho toy ny fanevan'ny kolontsaina Ekoatorianina, ny Vasija de Barro [es] (Ny tavy tany manga). Hitantsika eto ny feo sy isary miaina lalaovin-dry Benitez sy Valencia. Ity manaraka ity ny andininy farany tamin'io tsanganasa io:
Teraka avy aminao aho ary hiverina aminao
Tavy tanimanga sy fotaka
Amin'ny fahafatesako dia hiverina aminao aho
am-pitiavana ny vovokao.
Tsy hotanisaintsika eto daholo ireo fandraisan'anjaran'i Adoum tamin'ny literatiora Ekoatorianina, fa mba hahazoana ny andinindinin'ireo dia soratanao eo amin'ny Google fotsiny ny anarany. Anehonay ampahany sasantsasany avy amina asa sorany iray tena misongadina ianareo : Entre Marx y Una Mujer Desnuda (Teo amin'i Marx sy vehivavy mitanjaka iray) izay lazaina ho mifototra amin'ny tantaran'ny Parti Communiste Ekoatorianina [es] ary iray amin'ireo boky Ekoatorianina manan-danja, raha araka ny voalazan'ny mpanoratra Bruno Sáenz [es]. Ny mpanonta ny boky Lunas Azules [es] dia nanana fahafahana nihaona tamin'i Adoum, ary niteny izy fa hitohy hiaina izy [Adoum] isaky ny mandray iray amin'ireo bokiny izy. Mitantara ihany koa ny sasany amin'ireo ampahany mavesa-danja ao amin'ny Entre Marx y Una Mujer Desnuda izy.
Ruben Darío Buitron [es] dia mpanao gazety iray afaka nanadihady an'i Adoum tamin'ny taon-dasa. Izy dia tena maneho sarisarin'ny tena mahaolona, sahisahy, sy mazava momba ny mpanoratra. Nilaza i Adoum miaraka amin'ny maha ‘Ambateño’ azy (mponina avy any amin'ny tanàna Ekoatorianina any Ambato), ny nahatonga azy ho tia ny renivohitra Quito, ny fombam-piainany, ireo mponiny sy ireo zavatra niainany nandritra ny vanim-potoana naha-mpianatra azy. Na dia tany Frantsa,Chilie, ary ny fireneny niaviany aza no nandaniany ny antsasaky ny taona niainany, nomeny toerana manokana tao am-pony foana i Quito. Ito ny niheveran'i ‘Jorgenrique’ an'ireo namany Ekoatorianina:
Isika Ekoatorianina no tànan'izay heveritsika ho ambony, am-pangovitana, am-patahorana, ohatran'ny hiforetantsika manoloana ireo vahiny, toy ny fisalasalantsika, tahaka ny fanaovantsika tsinontsinona ireo izay mampitandrina antsika sy mihantsy antsika. Ary rehefa manandrana miala amin'io ‘complexe’ io isika, lasa mahery setra, mizahozaho sy tia sotasota. Tsia, tsy misy avy tamin'i Quito ireo.
Efa tsy dia salama i Adoum talohan'ny nahalasanany. Raha naseho ny tononkalony farany, Claudicación Intermitente [es] tao amin'ny trano Benjamin Carrión any Quito, dia niteny izy: “nanongo tena aho ary manenina tamin'ny niheverako hoe vitsy namana aho. Saika ireo olona rehetra eto amin'ity efitrano ity dia nanohina mafy ny foko. Manome toky aho fa tsy hiteny intsony hoe vitsy namana aho”.
Tany ampianarana no nahalalan'ireo mponina Ekoatorianina azy, Maro amin'ireo mpampianatra no mitaky ny hamakian'ireo mpianany iray amin'ireo asa sorany. Tamin'io fomba io no nanajan'ireo olona azy, na dia misy amin'ireo olona aza milaza fa tsy mbola namaky na iray aza tamin'ireo asa sorany. Raul Farias [es] , ohatra, dia mihevitra fa ny itiavany an'i Adoum dia satria izy nanonofinofy firenena lafatra kokoa ary niady mba hampitombo ny lanja kolotoraly, indrindra indrindra ara-javakanto. Farias dia miteny fa niady tamin'ny fanavakavahana sy ny tsy fitoviana, ary niezaka foana mamaly ilay fanontaniana hoe: “Inona no atao hoe Ekoatorianina?”
Toy izay efa nambara tany aloha, tsy matetika ireo mpitoraka blaogy no miresaka momba lohahevitra iray mitovy. Rafael Mendez [es] dia mifantina sary miaina ao amin'ny Youtube ahitàna an'i Jorge Enrique miventy ireo tononkalony sy asa sorany. Maria Paula Romo mamerina mamoaka tononkalo kanto an'ilay mpanoratra , I Believe in my Country [es] (Mino ny fireneko aho), ary ho an'ireo liana amin'ireo tambajotra sosialy dia ity misy takelaka Facebook iray ahafahana mamaky fanamarihana vitsivitsy mikasika ny fahalasanan'i Jorge Enrique Adoum.
Sary kely avy amin'i Jody Art